बंगलादेशमा बलात्कारको आरोपमा ५ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला – Makalukhabar.com
आज छठ पर्वको मुख्य दिन, यस्तो छ ब्रत विधि
मकालु खबर	 २०७७ मंसिर ५ गते
मकालु खबर	 २०७७ मंसिर ३ गते
कोरोना संक्रमणबाट पूर्वगाविस अध्यक्षको मृत्यु
सडकमा ‘बेवारिसे’ अवस्थामा काेही कसरी आइपुग्छन् ?
चन्द्र भर्सेस किशोर, कुन प्रदेशमा कसको पल्लाभारी ?
बंगलादेशमा बलात्कारको आरोपमा ५ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला
मकालु खबर	 Oct 15, 2020 मा प्रकाशित 163
काठमाडौं । बंगलादेशको अदालतले बलात्कारको आरोपमा ५ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । सन् २०१२ मा १५ वर्षीया वालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कार को घटनाका दोषी ५ जनालाई बिहीबार मृत्यु दण्डको फैसला सुनाइएको हो ।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारका घटना सुल्झाउन गठित विशेष अदालतले बिहीबार उत्तरी जिल्ला टाङ्गिलबाइमा यो फैसला सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार पीडित बालिकाको केटा साथीले उनलाई खोला नजिकैको क्षेत्रमा लिएर गएका थिए । जहाँ पीडितको साथी र अरु दुई जनाले बलात्कार गरेका थिए । यो घटनामा अन्य दुई जना युवकले पनि सघाएका थिए । यो घटनामा पाँचै जनालाई अदालतले दोषी रहेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो ।
सोमबार मात्रै बंगलादेशले बलात्कारको मुद्दामा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने विधेयक पारित गरेको थियो । बलात्कारको मुद्दामा मुलुकभर आन्दोलन चर्किदै गएपछि बंगलादेश सरकारले बलात्कारको मुद्दामा मृत्युदण्ड दिन सकिने गरी कानुन संशोधन गरेको थियो। बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
गत साता बंगलादेशमा एक सामूहिक बलात्कारको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेसँगै देशभर विरोध प्रदर्शन भएको थियो । अलजजिरा
मकालु खबर 1812 खबरहरु0टिप्पणीहरू
आफूविरुद्ध प्रदर्शन चर्किएपछि किर्गिजस्तानका राष्ट्रपतिद्वारा राजीनामाकाे घोषणा
झलनाथ खनालको फोक्सोमा पानी, कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिभ : ह्याम्स अस्पताल
अवैध लागूऔषध सहित बाँके र तनहुँबाट तीन जना पक्राउ